Efa nanova ny famaritana ve ny fanamafisana ny motera?
Tsy tsiambaratelo ho an'iza na iza fa ny sehatra ara-barotra nomerika dia tena miova ary tsy mijanona. Tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, Google dia nanao fanovana goavana tamin'ny algorithm-n'izy ireo. Ny tanjona fototra amin'ny fiovana dia ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tranokala izay mamaritra ny TOP. Amin'izao fotoana izao dia lasa mahay mamorona Google i Google ka afaka manombana ny kalitaon'ny tranonkala amin'ny isa maromaro. Izany no mahatonga ny foto-kevitra momba ny famaritana fikarohana momba ny fikirakirana fikarohana ao anaty sora-baventy. Raha te hahazo toerana ambony ianao, dia tokony hampihatra ny teknika fanadiovana karazana fikarohana rehetra momba ny fanatsarana sy ny toerana - contact a computer expert. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanavaozana ny algorithm Google amin'ny mpizarazara amin'ny fampiasana ara-dalàna ny teknolojia SEO sy ny fomba hamonjena ireo tranonkala raha toa ka hiova ny fitsipiky ny SEO.
Ny andry fitadiavana fikarohana
Ireo manam-pahaizana SEO rehetra dia manaiky fa misy singa tsy azo ovaina ao amin'ny sehatra fanatsarana - ny votoaty tsara. Raha mamorona votoatiny avo lenta ianao, izay manome rohy mifandraika amin'ny sehatra hafa manan-kaja, ny tranonkalanao dia ao TOP amin'ny toe-javatra rehetra. Na dia izany aza, dia efa lany andro ny fomba fanatsarana ny isa sy ny kalitaon'ny rohy anatiny. Amin'izao fotoana izao, mila mampiroborobo ny fampielezan-kevitra fampielezan-kevitra ianao mifantoka amin'ny endrika fototra telo - ny votoatin-kalitao, ny tambajotra sosialy, ary ny fananganana rohy. Mba hahazoana ny vokatra amam-pahombiazana ambony indrindra amin'ny laharam-pifaneranana, dia mila mampifandray ireo lafiny rehetra ireo ianao.
Ny votoaty tsara
Amin'izao fotoana izao dia nanjary fomba fiasa goavana eo amin'ny mpivarotra an-tserasera ny votoaty raha manomboka manasazy ny votoatin'ny kalitao sy ny kopia i Google.Ho fampivoarana ny voka-pikarohana amin'ny tranonkalanao, dia mila mamorona lohahevitra avo lenta sy mahaliana ianao eo amin'ny sehatry ny tsenan'ny loka. Ataovy azo antoka fa ampidirinao ao anatin'ny votoatinao araka ny fehiny ny famaritana ny SEO. Ankoatr'izay, mila mampifanaraka tsara ny votoatinao ianao amin'ny fampiasana bala, fehintsoratra ary lisitra voatanisa. Google dia manana laharam-pahamehana lava sy tsara kokoa noho ny iray fohy sy mazava.
Ny rohy ara-java-manan'aina
Ny fananganana rohy dia tetikasam-pamokarana lehibe indrindra izay azo atao ara-boajanahary sy tsy ara-organika. Ny tranobe mifandraika amin'ny SEO na ny fotsy SEO dia manondro ny fahazoana saka amin'ny rohy mankany amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny fomba famahanam-bolongana, fizarana rohy, ary famoahana lahatsoratra. Ny SEO tsy organika na black-hat SEO dia mikasika ny fividianana rohy sy ny fambolena fikambanana. Fomba tsotra hanintonana mpampiasa izany. Na izany aza, mila mahatakatra ianao fa ireo mpiserasera amin'ny tranokalanao amin'ny rohy finday dia mety tsy hiverina amin'ny mpanjifanao na oviana na oviana. Ankoatr'izany, ity karazana fandatsaham-bato mainty hoditra ity dia voasazy noho ny fitaovam-pitadiavana ary mety handratra ny lalao. Tokony hahazo rohy amin'ny alalàn'ny fanamarihana ianao fa tsy handoavana izany.
Tokony hodinihinao fa ny fomba fampidirana ny lahatsoratra fanonganam-pitenenana manan-danja ao amin'ny famoaham-baovao an-tserasera dia sarobidy amin'izao fotoana izao ny zava-misy marina. Amin'izao fotoana izao, i Google dia manasokajy rohy amin'ny endri-tsoratra amin'ny famoaham-baovao amin'ny gazety ary ireo boky hafa mahazatra toy ny rohy tsy ara-dalàna. Google dia te-hanakana ny rohy tsy ara-boajanahary amin'ny famoahana ny famoaham-baovao. Na izany aza, raha toa ny hafa dia mihevitra ny mpitarika manoratra momba ny vokatrao na ny serivisinao ary mametraka rohy mifandraika amin'izany, dia heverina ho rohy ara-dalàna amin'ny Google.
Fanatanjahana matanjaka matanjaka
Ary ny teboka farany amin'ny fampielezan-kevitra fanosehana rehetra dia ny fampahalalam-baovao sosialy. Amin'izao fotoana izao, maro ireo mpampiasa no tonga amin'ny tranokalam-pifaneraserana amin'ny tambajotra sosialy satria aleony mandray fampahalalam-baovao amin'ny endriny tsara tarehy. Mba hanatsarana ny mari-pamantarana ny marikao, mila mazava ianao fa tokony hanana fisiana ara-tsosialy matanjaka. Hanampy anao ho lasa akaiky kokoa ny mpanjifa mety ianao ary hahafantatra ny zavatra ilainy.